8 zvirongwa zvekugadzira mitambo paPC kunyangwe usingazive maitiro ekuronga, Emulator.online ▷ 🥇
Kune zvirongwa zvinokutendera iwe kuti ugadzire mitambo kunyangwe iwe uine zvishoma kana usina ruzivo rwechirongwa. Ne software iyi zvinokwanisika kukudziridza mitambo yemipuratifomu mu2D uye 3D, ine madingindira anotangira paRPG kusvika kumitambo yekudzidzisa. Iko kune emahara uye akabhadharwa sarudzo kuti akwane chero chirongwa chebhajeti.
Kutamba / tambo
Twine ndeimwe yeturu yekugadzira maturusi iyo inoda zvishoma kana kusava neruzivo rwemutauro wechirongwa. Chirongwa ichi, zvisinei, chinoganhurirwa mukuvandudzwa kwemitambo-yakavakirwa mitambo, iyo inobvumidza kuumbwa kwenyaya dzekudyidzana uye dzisiri mitsara
Yakanakira kunakidzwa, kutamba basa uye thrillers Chakavanzika, tumira mhedzisiro muHTML. Iyo fomati inokupa iwe rusununguko rwekuti mutambo uwanikwe pamapuratifomu akasiyana kuburikidza nebrowser. Kana iwe uchida kuzviita muPC kana smartphone app, unofanirwa kushandisa chinoshandura.
Curl (mahara): Windows | macOS | Linux | Webhu
2. Unreal Injini
Unreal Injini inoita kuti iwe ugadzire zvese kubva pamyore 2D mitambo kuenda kumazita ane akasimba 3D mifananidzo. Pfungwa, iwe unofanirwa kuve nehunyanzvi hwekushandisa kuti uishandise. Asi wekutanga-ane hushamwari mhinduro inopihwa, inonzi Plano.
Chishandiso chine simba kwazvo zvekuti chinogona kushandiswa mumapurojekiti akaomarara, senge Redo de Final Fantasy VII. Izvo zvinokwanisika kutengesa iwo mutambo wakagadzirwa kune akasiyana mapuratifomu, akadai sePC, mutambo wevhidhiyo, mafoni emagetsi, chaiyo chaiyo michina, pakati pevamwe.
Basa racho nderemahara, kudzamara chirongwa chako chawana $ 3,000. Kubva ipapo, musiki anofanira kubhadhara 5% yemubhadharo kune Epic Mitambo, anovandudza Unreal Injini.
Unreal mota (mahara): Windows | macOS | Linux
GameMaker Studio 2 - Dhonza uye Donhedza
Pasinei nekutsigira mitambo ye3D, GameMaker inonyanya kuzivikanwa nekuvandudza mitambo ye2D. Iyo purogiramu inomira kuve nyore kushandisa uye kubvumira chero munhu kuti agadzire yavo yega mutambo. Pasina kunyora tambo yekodhi, uchishandisa iyo yekudhonza uye yekudonhedza mashandiro.
Asi hazvireve kuti chero munhu anoziva kodhi haakwanise kufara. Kana iwe uri chikamu cheboka iro, unogona kugadzirisa zvisikwa chero nenzira yaunoda. Iyo sevhisi inokutendera iwe kuendesa mhedzisiro kune akawanda mapuratifomu. Nekudaro, mune vamwe zvinodikanwa kubhadhara imwezve mari.
MutambiMaker Studio 2 (yakabhadharwa, ine yemahara kesi vhezheni): Windows | Mac OS
Gamesalad isarudzo yakanaka kune avo vatsva kumutambo wekuvandudza mutambo. Izvo hazvidi ruzivo rwekugadziridza mitauro, ichikubvumidza iwe kuti ugadzire uchishandisa yekukweva-uye-kudonhedza mashandiro.
Iyo software inovimbisa mibairo yakanaka mu2D, kunyangwe iine zviwanikwa zvishoma. Ipuratifomu iyi zvakare ine vhezheni yakanangana nedzidzo, nechinangwa chekudzidzisa pfungwa dzechirongwa, dhizaini yemitambo uye kugadzirwa kwedhijitari midhiya.
Vanonyorera kune iyo Pro vhezheni vanogona kushambadzira kune ese makuru mapuratifomu akadai seHTML, komputa, uye nhare mbozha.
MutamboSalad (yakabhadharwa, ine yemahara kesi vhezheni): Windows | Mac OS
5. Mutambi-wekutamba mutambo musiki
Seizvo zita rayo rinoratidzira, RPG Mugadziri chishandiso chekuvandudza mitambo 2D-yemaitiro. Kutamba. Chirongwa ichi chine maBhaibheri akati wandei, anopa akasiyana maficha. Iyo RPG Maker VX inovimbisa kuve yakapusa zvekuti kunyangwe mwana anogona kuishandisa.
Ndokunge, hapana ruzivo rwechirongwa rwunodikanwa kukudziridza mutambo, ingo dhonza uye udonhedze. Iko kushandisa kunokutendera iwe kuti ugadzire mavara, isa mimhanzi uye nemhedzisiro, pakati pemamwe mabasa. Mutambo unogona kutumirwa kuHTML5, Windows, macOS, Linux, Android, uye iOS.
RPG musiki (yakabhadharwa, ine yemahara kesi vhezheni): Windows
Kutamba / YouTube
Kutsvaga chishandiso chinokutendera iwe kutamba inowirirana nyaya mitambo kunyangwe usingazive maitiro ekuronga. Kunyangwe iyo yekutarisa iri pane iwo mavara, zvinokwanisika kuisa mapikicha, mimhanzi uye kurira mhedzisiro. YouTube neVimeo mavhidhiyo anotsigirwawo.
Chero ani zvake ane hunyanzvi hwekuronga anogona kugadzirisa kutaridzika kwemutambo nenzira ipi neipi yavanoda. Mhedzisiro yacho inogona kutumirwa kune iyo PC kana seye mobile application.
Tsvaga (mahara): Windows | Webhu
Kubatana sarudzo kune avo vanoziva zvirongwa. Yemahara kune vashandisi vanowana isingasviki $ 100.000 pagore, iyo software inoita kuti iwe ugadzire 3D mitambo ine inoshamisa mifananidzo.
Iyo purogiramu ine ekuratidzira, odhiyo uye vhidhiyo maturusi, mhedzisiro yekuisa, mwenje uye zvimwe zvakawanda. Basa racho rinogona kutsikiswa pamapuratifomu akasiyana, akadai sePC, nhare mbozha, mitambo yemavhidhiyo uye VR nemaAR zvishandiso.
Kubatana (yemahara, ine sarudzo dzakabhadharwa): Windows | macOS | Linux
Kahoot haisi nzvimbo yekuvandudza, asi inogona kubatsira kune avo vanoda kugadzira mitambo iri nyore yekudzidzisa. Iyo saiti inokutendera iwe kuti ugadzire mibvunzo, echokwadi kana enhema masimba, mapipi, Pakati pezvimwe zviwanikwa zvekushandisa mumakirasi chaiwo kana akatarisana.
Izvo zvinokwanisika kuseta iyo nhamba yemapoinzi uye kuisa Nguva, Kuita kuti mutambo unyanye kunakidza uye kukwikwidza. Zvese zvinoratidzirwa zvakasiyana pachiratidziro chemudzidzi wega wega, kungave kuburikidza nekuzvipira kunyorera kana webhu vhezheni yebasa.
Kahoot! (yemahara, ine sarudzo dzekubhadhara): Webhu | Android | iOS
Ndeipi chirongwa chekushandisa kugadzira mitambo?
Zvese zvinoenderana nehunyanzvi hwako, zvinangwa uye mhando yemidziyo yaunayo.
Kune zvishandiso zvinopa zvirinani zvakagadzirira mitambo, senge Kahoot, nepo vamwe vachida kuronga mitauro mitauro, senge Kubatana. Saka usati wasarudza, unofanirwa kufunga nezveunyanzvi hwekugadzira uye hwekugadzira.
Mapurogiramu-akagadzirira mutambo anogona kuve akanaka kune avo vasingade kuisa mari mune iri kusimukira basa. Ivo vane kugona kugadzira nekudzvanya nekukweva -mukati mezvinhu zvemitambo zvinoda zvishoma kusanzwisisa kwenyaya.
Kunyangwe iri nyore kushandisa, ivo vanopa rwakawanda rusununguko rwekusika uye maitiro ekugadzirisa. Iyo yakanaka sarudzo kune avo vanoda kudzidza kuronga uye kuisa mari mune yemitambo zvisikwa. Izvi ndozvinoitika GameMaker Studio 2 uye Kutsvaga.
Zvakakodzera kutaura kuti mapurogiramu mazhinji, kunyangwe iwo ane zviwanikwa zvevatangi, ane zviwanikwa kune avo vane hunyanzvi hwekuronga. Ava vashandisi vanogona kuwedzera kuongorora sarudzo, vachigadzirisa zvinenge zvese zvinoenderana nemutambo.
Izvo zvakakoshawo kuti utarise izvo zvekushandisa zvaunofanira kugadzira. Usati watanga kurodha pasi chirongwa, unofanirwa kutarisa kuti komputa yako inosangana nezvinodiwa here. Izvo zvakakosha kuti iwe uve nehardware iyo inokutendera iwe kuti ushande pasina matambudziko uye pasina kukundikana.
Zvikasadaro, sarudza chakareruka software ine mashoma zviwanikwa kana yepamhepo chishandiso. Nenzira iyoyo, zvirinani, iwe unogona kuita chero chaunoda.
Iwe unoda kugadzira mutambo zvichienderana nenyaya kana iwe unofarira 3D FPS mutambo? Zvino zvinodikanwa kuti uongorore zviwanikwa zvinopihwa nechirongwa ichi, kuti uve nechokwadi chekuti chinoburitsa mhedzisiro yaunoda.
Kana mutambo waunoda kukudziridza une yakasarudzika application, tinokurudzira kuti iwe uusarudze. RPG Muiti, semuenzaniso, inopa akasarudzika maficha eiyi mhando yerondedzero, yaungangowana iwe mune mamwe maturusi. Kana kuti uchavaona nenzira isinganzwisisike.
Zvakare, zvakakosha kuti utarise kana iyo software ichiburitsa mutambo kune ipuratifomu yaunoda. Iko hakuna chikonzero mukugadzira mutambo uzere uye nekuzoona kuti haugone kutambwa paserura kana chaicho chaicho chigadzirwa.
Nzira yekugadzira sei application usingazive chirongwa? Tsvaga zvishandiso zvinoshamisa
Zvekuedza maapplication ekunakidzwa uye kudzidza panguva imwe chete
Logic kunyorera kudzidzisa kufunga uye ndangariro